नेपालको अन्नपूर्ण विमान दोहामा ग्राउन्डेड, उडान भरेको ३ महिनामै समस्या ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालको अन्नपूर्ण विमान दोहामा ग्राउन्डेड, उडान भरेको ३ महिनामै समस्या !
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान दोहामा ग्राउन्डेट भएको छ। कलसाइन ९एन–एएलवाइ भएको अन्नपूर्ण विमानको ब्रेक सिस्टममा समस्या आएकाले बिमान ग्राउन्डेड भएको निगमले जानकारी दिएको छ।
उडान गरेको तीन महिना पछि वाइडबाडी ३३०–२०० विमान ग्राउन्डेट भएको हो। २७८ सिट क्षमता भएको यो विमान बिहीबार राती ९ः२५ मा काठमाडौंबाट दोहाका लागि उडान गरेको थियो। सो विमान दोहामा ११ः५० मा अवतरण हुने तालिका थियो।
निगमका सहप्रवक्ता शैलेस कंसाकारका अनुसार, विमान अवतरण भएपछि इन्जिन चेक जाँच गर्ने क्रममा ब्रेक सिस्टममा समस्या देखिएको हो। निगमका इन्जिनियरले विमानको आवश्यक जाँच गरिरहेका छन् ।
बिहीबार दोहा उडेको विमान शुक्रबार विहान ८ः३० मा नेपाल आइपुग्ने तालिका थियो। तर सो विमान ग्राउन्डेड भएपछि निगमको विमानबाट नेपाल आउने यात्रु मर्कामा परेका छन् ।
दोहामा ग्राउन्डेट भएको विमान असार १४ मा नेपाल आइपुगेको थियो भने यसले व्यवसायिक उडान साउन १६ गते पहिलो उडान दोहा गरेको थियो।
निगमले दुई वटा विमान खरिदका लागि नेपाल सरकारको ग्यारेन्टीमा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको १२–१२ अर्ब ऋण लिएको थियो। यही ऋणबाट निगमले प्रतिविमान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको हो।
ट्याग्स: Nepal Airlince